असोज ६, २०७३
काभ्रे ३१ चैत्र– विक्रम संवतको नयाँ बर्ष २०७४ भोलि सुरु हदैछ । नयाँ बर्षको अवसरमा नयाँ नयाँ ठाउँहरु घुमफिर गर्ने र रमाइलो गर्ने चाहाना सबैको हुन्छ । शहरी क्षेत्रका युवा युवतीहरु नयाँ बर्षको अबसरमा नयाँ नयाँ ठाउमा घुम्न रहर गर्छन । सहरको कोलाहाल र तनावपूर्ण जीवनशैलीमा बिर्षन पनि नयाँ ठाउ घुम्ने रह धेरैमा हुन्छ । काभ्रे जिल्ला काठमाडौं उपत्याकाबाट सबभन्दा नजिकको जिल्ला र पर्यटकीय गन्तव्य हो । नयाँ बर्षको अबसरमा काभ्रेका यी पाँच गन्तव्य तपाइको रोजाइको गन्तव्य पर्न सक्छ ।
पर्यटकीय स्थल नगरकोट भक्तपुर र काभ्रेको सीमानामा पर्छ । स्थानीय तहको नयाँ संरचना अनुसार नगरकोट मन्डन देउपुर नगरपालीकामा पर्दछ । नगरकोट काठमाडौं उपत्यका नजीकको प्रसिद्ध रमणीय स्थल हो । काठमाडौंबाट ३२ किलोमिटर उत्तर(पूर्वमा र भक्तपुर नगरवाट २० कि.मी. पूर्वमा अवस्थित रहेको छ । यो समुद्री सतहदेखि २ हजार ७५ मिटर उचाइमा रहेको छ । गर्मी याममा पनि चिसो मौसम हुने नगरकोटबाट मौसम सफा भएको बेला उत्तरमा मनमोहक हिमालयका चुचुराहरू देख्न सकिन्छ । यहाँवाट देखिने अन्य हिमाल चुचुराहरूमा धौलागिरि हिमश्रृंखलादेखि कञ्चनजंघा हिमश्रृंखलासम्मको मनांस्लु, गणेश हिमाल, लामटाङ्ग हिमाल, गौरी शंखर, चावु, ल्होत्से, मकालु नेम्वुल इत्यादि छन् । नगरकोट क्षेत्र हिमालको काखबाट निस्कने सूर्योदयको दृष्यावलोकन लागि पनि प्रसिद्ध छ ।
नगरकोटमा खानपिन तथा बसोबासका लागि सामान्यदेखि स्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरू उपलब्ध छन् ।
काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको सदरमुकाम धुलिखेल नगरकोट पछि काठमाडौं उपत्यकाबाट नजिकके पर्यटकीय गन्तव्य हो । करीव १६२५ मिटर (५३३० फिट)को उचाइमा अवस्थित धुलिखेल नगरी हरियालीले ढाकिएका होचा अग्ला पहाडहरू र ती भन्दा पर सेता हिउँले सजिएका पर्वतमालाको पृष्ठभूमि पारेर पानपाते आकारमा बसेको छ । हिमाली चुचुरा र र्सूयोदयको बिहङ्गम द्रश्य आदिले पर्यटकहरूलाई मात्र नभै नेपालीहरू समेत लोभिएको कुरा हिउँदमा स्थानीय टुँडिखेलमा हुने बनभोजहरूको घुइँचो, होटलमा रात बिताउन आउने रसिकहरूको लामो लाईन, र पर्यटकहरूको बिहान ३ बजेदेखि नै भेला हुने बातावरणले नै बताउँछ । नेपाल मा भित्रिने पर्यटकहरु एकपटक धुलीखेल आउने गरेको होटल एसोसिएसन हानका अध्यक्ष प्रेमकन्ठ मकाजु बताउछन् । हजार सिडी चढेर पुगिने बतासे डाँडा धुलिखेलको अर्को आकर्षक स्थल हो ।
नमोबुद्ध काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको सिमलचौर श्यामपाटी गाउपालिकामा पर्ने एक इतिहासिक प्रख्यात बौद्ध स्तूप हो । यो स्तूप तिब्बती बौद्ध धर्मालम्बीहरूले मान्ने तीन चैत्यहरू बुद्धानाथ, स्वयम्भूनाथ र नमोबुद्धे मध्ये एक हो । यहाँ वनको मध्यभागमा बुद्धको चैत्य तथा स(साना बौद्ध गोन्पाहरू छन्। नमोबुद्ध क्षेत्रमा बुद्धमार्गी तामाङको बस्ती पनि रहेको छ अहिले नमोबुद्र एक धामिर्क पयटकिय गन्तव्य को रुपमा परीचित छ । शनिवार वा अन्य विदाको दिन आन्तरीक र वाह्य पर्यटकहरुको नमोवुद्रमा भिड लाग्ने गर्छ । आइकिङका लागि पनि यो क्षेत्र प्रख्यात छ ।
दोलालघाट इन्द्रावती र भोटेकोशी नदीको दोभान नजीक काठमाडौं देखि ५६ कि.मि.पूर्वमा पर्छ । यो क्षेत्र समुद्र सतहबाट ३५० मि. उचाइमा अवस्थित छ । अरनिको राजमार्गको निर्माणले उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा लगायत सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप जिल्लासम्म व्यापारिक प्रभाव परेको छ । प्रस्तावित दोलालघाट(धनकुटा राजमार्ग एवं दोलालघाट(चौतारा सडकको पनि संगमस्थल भएकाले यस क्षेत्रको महत्व थपिएको । आन्तरीक पर्यटकहरुले दोलालघाट को अहिले चमनै फेरेको छ । काठमाडौंवाट विदाको दिनमा ईन्द्रावति नदी र सुनकोसि नदीको किनारमा पौडी खेल्न र पिकनिक गर्न आउने गरेका छन् ।
काठमाडौंबाट नजिकको दुरीमा रहेको काभ्रे र भक्तपुरको संगम स्थल साँगा पनि घुम्न लायक ठाउ हो । एशियाकै अग्लो शिवको मुर्ती स्थापना गरिको कैलाशनाथ महादेवको दर्शनका लागि आन्तरिक पर्यटकहरु यस स्थानमा आउने गरेका छ्न् । काठमाडौं लगायत सवै सहरको मोनोमोहक वातावरण यहाँ रहेको छ । नमुना गाउँ, आसापुरी महादेव लगायत महत्वपुर्ण घार्मिक स्थलहरु रहेकोले यसको महत्व रहदै आएको छ ।
असोज ६, २०७३ मा प्रकाशित